Elf Cat - uhlobo olukhethekile!
Elf lihlotshaniswa Celtic izinhlamvu yokudlala inganekwane. Uma othile uyaphupha ngothile engavamile ekhaya, isilwane, okukhulunywe ngayo esihlokweni, kufanele Ukugunda. Cat Elf - lomncane kanye ngesikhathi esifanayo uhlobo olungavamile.
Cat zohlobo Elf awavelanga ngenxa yemvelo futhi ngenxa cross-yokuzalanisa Sphynx waseCanada American ukoma. Lo mbono kusukela abalimi abanolwazi kusuka e-United States - noKaren Nilsson Lead Christie. Kusukela ngasekupheleni kwawo-'90s, lezi abathanda kungukuthi ishiywa bezama ukuthola imiphumela kusukela ekuhlolweni kwabo. Kuphela 2006 azalelwa amazinyane eside elindelwe. Ngenxa ukugoba izindlebe edlule zohlobo wethiwa the Elf.
Cat Elf ithengiswe ninodwa e izinkulisa of America. Ukubhalisa TICA isibe kungenzeka kusukela ngo-2007. Abazalanisi bakwamanye amazwe ngokukhethekile wathenga amazinyane lizalele kubo ngaleso sinombono ukudayiswa okwalandela. Kufanele kuqashelwe ukuthi ngenxa ukubukeka engavamile kunzima kakhulu ukukhipha izilwane inkohliso for elves.
I engavamile zalolu hlobo kuba ukuma elingavamile izindlebe. Ziyakwazi ezinkulu kanye recurved. Uma unesithakazelo sina e zohlobo ikati Elf, izithombe ingabonwa lesi sihloko. Amehlo izilwane likhulu kakhulu, okwe-alimondi yayithandwa, ngokuvamile umbala oluhlaza noma okwesibhakabhaka. Ngokubukeka kuba ikati engavamile kakhulu, enjengamakhiwane umfokazi! Kuyaphawuleka ukuthi umbala ikati kungaba ngokuphelele noma yini! Kuye umbala abazali - kancane Elf grey ozalwa, fair, zamapetshisi, abamnyama, kanye nokunye ukwahlukahlukana. Uma kuqhathaniswa isisindo kwalesi silwane - hhayi ingane - ngabanye omdala ufinyelela 7kg! Ngakho-ke, kumelwe siqonde ukuthi isilwane siyokondliwa kahle kakhulu. Uvolo elves akudingeki isici okufana ngofuzo sphinxes.
Cat Elf - uhlobo futhi isilwane emnene. Lokhu uhlakaniphile, nesineke, isidalwa oqaphelayo unika ngesisa enkosini yayo. Ziyakwazi benomusa futhi kunothile uthando kuwo wonke amalungu omkhaya. Okunjalo amakati - umane samuntu umusa nobuhle!
Kodwa elves zidinga ukunakekelwa kakhulu. Kufanele njalo bazizwe bedingeka. Lezi amakati uthande ukuba eduze umninikhaya, ngisho ngesikhathi sokulala. Kodwa uma isilwane ubuhlungu, okwazi ukuphindisela kanye iqhinga ezingcolile.
Ukunakekelwa kwezempilo kanye nezici
Curls - amadlozi zohlobo - izilwane ziphilile ngempela futhi luqinile. Cat Elf kuzo eliyifa lesi sici. Uma unakekelwe kahle futhi silondoloze ke kahle, ungaphila ngokuvumelana kakhulu ngendlela 19 iminyaka! Cat kudingeka ageze njalo, hhayi ngaphansi kuka 1 isikhathi 2 amaviki. Ngenxa isikhumba sakhe ibuthaka, kubalulekile ukusebenzisa imoto umntwana. Akubalulekile ukuba overfeed isilwane, ngoba ukhuluphele kubi ngoba uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi.
Elf kudinga izimo ezikhethekile lokushisa, umuntu kufanele ufudumale njalo. Olele isilwane futhi kufanele ngokukhethekile ifakwe - mat esithambile noma isiguqo ukulingana kahle.
Cats lokhu uhlobo lwenkomo olungakwazi ukunqoba izinhliziyo yimuphi umuntu. Mnene, nothandekayo kuye, nge amehlo kaPawulu angena ajule - babangela ukujabula nenhlonipho!
Incazelo Mastiff zohlobo iSpanishi, imvelo izithombe kanye nokubuyekeza of the abanikazi
Gourmet ukudla amakati - uswidi isilwane
Uyini-Chinese Book of Changes?
Sokuqalisa i-Android: kokukhetha igobolondo entsha ngoba devaysa